Baro Sida Loola Dhaqmo Qofka Xun Ee Xanaaqa Badan - Hablaha Media Network
HMN:- Qofka sida loola dhaqmo waa Xirfad aysan fahansaneen dadka badankiisa, inaad qaadato dhaqanka wanaagsanna wuxuu had iyo jeer kaa yareeynayaa dhibaatooyin laga yaabo inaad la kulanto.
Haddaba waxaa jiro dad leh dhaqan xun oo laga yaabo inaad kula kulanto goobta aad ka shaqeeyso ama si guud ahaanba noloshaada adiga gaarka kuu ah.
Waxaana waajib ah in aad ula dhaqanto dadka noocaas oo kale ah si wanaagsan haddii xitaa ay isku dayaan in ay kuu geeystaan dhibaatooyin.
Haddaba wax ka baro dhowr talooyin oo muhiim ah sida aad ula dhaqmi leheyd dadka noocaas oo kale ah haddii aad la kulanto:
1-Hala doodin marka aad la joogtid shaqsi dabeecad xun mararka qaar, isuku day inuu noqdo go’aan kaada mid wanaagsan si aad u ogaato waxyaabaha uu ku wanaagsanyahay qofkaasi, iskana ilaali shaqsi kasta wuxuu jecelyahay in la wanaajiyo.
2-Ha u badnaanin had iyo jeer la joogga qof xanaaq badan ama qof dabeecad xun , xitaa hadii aad la nooshahay isku day inta badan waqtigaada in aad la qaadato qoyska intiisa kale oo kugula nool guriga ama saaxiibadaada banaanka ku sugan.
3-Haddii aad tahay mid wax qabanaya halla wadaagin dadka noocaasi oo kale ah waa intaas oo aad qaadataa dabcigooda oo kale iyo qaabka ay u fikirayaan.
4- Had iyo jeer wanaag u muuji ayaga, haddii ay dhibaato haysata ayaga oo aad Awoodid in aad wax ka qabato u samee gargaar.
Tusaale: hadii ay shaqada ku adag tahay ha ahaato mida guriga ama tan bannaanka kaalmee oo ula shaqey, ugu yeer inay kula daawadaan filimka, sidoo kale haddii ay jirto wax yaabo dhib ku ah inay qabtaan garab istaag oo la qabo.
5- U sheeg sida uu yahay dareenkaada marka ay si xun ula dhaqmayaan dadka kale kuna waani inay si wanaagsan ula dhaqmaan shaqsiyaadka kale, iyo waxay awoodaan inay qabtaan iyo qaabka ay u qabanayaan hana ku qasbin arrinkaas, maaxaaa yeelay badanaa dadka nuucaas oo kale ah ma ahan kuwa jecel hadallada ku aaddan qaabka ay u dhaqmayaan.